Posted by Tranquillus | Nov 19, 2020 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Waa in lacag lagaa siiyaa wakhti kasta oo dheeraad ah oo aad shaqaysay. Liiskaaga mushaarka waa inuu caddeeyaa inta saacadood ee aad shaqeysay iyo heerka laguu magdhaabay. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood loo-shaqeeyahaagu wuxuu ilaawaa inuu bixiyo. Markaa waxaad xaq u leedahay inaad sheegato. Tan awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad warqad u dirto waaxda ay khusayso si aad u codsato sharciyeyn. Waa kuwan qaar ka mid ah waraaqaha tusaalaha ah ee lagu codsanayo lacag-bixin.
Faahfaahinta qaar ee waqtiga dheeriga ah
Saacad kasta oo uu shaqaaluhu ku shaqeeyo hindisaha loo-shaqeeyaha waxaa loola dhaqmayaa sidii waqti dheeraad ah. Xaqiiqdii, sida uu qabo Xeerka Shaqaalaha, shaqaaluhu waa inuu shaqeeyaa 35 saacadood usbuucii. Intaas waxaa dheer, kordhin ayaa lagu soo rogay loo shaqeeyaha.
Si kastaba ha noqotee, midna waa inuusan isku qaldin waqtiga dheeriga ah iyo waqtiga dheeriga ah. Waxaan tixgelineynaa saacadaha ama shaqaale shaqeeya waqti dhiman. Iyo yaa looga baahan yahay inuu shaqeeyo saacado ka baxsan muddada lagu sheegay qandaraaskiisa. Sida oo kale saacado dheeraad ah.
Xaaladahee kiisaska dheeraadka ah aan laga fiirsan?
Waxaa jira xaalado aan xisaabta lagu darsan karin. Macnaha noocan ah, shaqaaluhu sinnaba uma dalban karo lacag koror kasta. Kuwaas waxaa ka mid ah saacadaha aad go'aansan laheyd inaad kaligaa qabato. Adiga oo aan wax codsi ah ka helin loo shaqeeyahaaga. Kama bixi kartid boostadaada laba saacadood goor dambe maalin kasta. Markaa weydii in la bixiyo dhamaadka bisha.
Kadib, waqtigaaga shaqada waxaa lagu qeexi karaa heshiis qiimo go'an, ka dib heshiis laga wada hadlay shirkaddaada gudaheeda. Aynu qiyaasno in waqtiga joogitaanka toddobaadlaha ah ee uu xirmadaani bixiyay ay tahay 36 saacadood. Xaaladdan oo kale, xad-dhaafka lama tixgelinayo, sababtoo ah waxay ku jiraan xirmada.
Ugu dambeyntiina, waxaa sidoo kale jira kiisas saacado dheeri ah lagu beddelay waqti magdhow ah, marka haddii aad xaq u leedahay. Ma filan kartid wax intaas ka badan.
Sidee loo caddeeyaa jiritaanka waqti dheeraad ah oo aan la bixin?
Qofka shaqaalaha ah ee raba inuu sii wado cabashada ku saabsan saacadaha dheeraadka ah ee mushahar la'aanta wuxuu fursad u leeyahay inuu soo ururiyo dhammaan dukumiintiyada u oggolaanaya inuu taageero codsigiisa. Si tan loo sameeyo, waa inuu si cad u go'aamiyo saacadaha uu shaqeynayo oo uu qiimeeyo tirada saacadaha dheeraadka ah ee khilaafku la xiriiro.
Marka wax walba la hubiyo. Waxaad xor u tahay inaad soo bandhigto caddeyn ahaan markhaatiyada asxaabtaada, ilaalada fiidiyowga. Jadwalka muujinaya saacadahaaga dheeriga ah, soosaarida elektaroonigga ama farriimaha SMS-ga oo muujinaya isdhexgalkaaga macaamiisha. Nuqulada xusuus-qorka elektiroonigga ah, diiwaanka waqtiga saacadaha. Waxaas oo dhan waa inay si cad u la socdaan xisaabaadka la xiriira waqtiga dheeriga ah.
Shaqaaleeyahaaga, waa inuu jaangooyaa xaaladda haddii codsigaaga uu sharci yahay. Bulshooyinka qaar waa inaad la dagaallanto bil kasta. Faragelintaada la'aan, bixinta saacadaha dheeraadka ah si nidaamsan ayaa loo illaabi doonaa.
Sidee loo sii wadaa cabashada ku saabsan bixinta lacag la'aanta waqtigaaga dheeriga ah?
Waqtiga dheeraadka ah ee shaqaaluhu shaqeeyaan badanaa waa baahida iyo danaha ganacsiga. Markaa, qofka shaqaalaha ah ee isku arka inuu dhibsan yahay bixinta bixintiisa waqtigiisa dheeriga ah wuxuu codsan karaa halbeegga loo shaqeeyaha.
Dhowr talaabo ayaa la raaci karaa si loo helo jawaab wanaagsan. Marka ugu horeysa, waxay noqon kartaa kormeer dhanka loo shaqeeyaha ah. Marka arinta si dhaqso ah ayaa lagu xalin karaa iyadoo la qoro warqad lagu muujinayo dhibaatadaada. Dhinaca kale, haddii ay dhacdo in loo-shaqeeyaha uu diido inuu bixiyo waxa uu kugu leeyahay. Codsigan waa in la doorbidaa lagu sameeyaa warqad diiwaangashan oo leh aqoonsiga rasiidka.
READ Warqad Sample ah oo lagu dalbanayo bixinta lacagta caymiska
Haddii loo shaqeeyuhu uusan wali dooneynin inuu xaliyo xaalada, ka dib marka la helo boostadaada. La xiriir wakiilada shaqaalaha si aad ugu sheegtid kiiskaaga una raadsato talo. Waxay kuxirantahay xaddiga dhaawacaaga iyo dhiirigelintaada. Adiga ayay kugu xiran tahay inaad eegto haddii aad aadeyso maxkamadda warshadaha. Ama hadaad joojiso shaqada dheeriga ah. Ka shaqee wax badan si aad u kasbato isla, runti maahan wax xiiso leh.
Foomka waraaqaha ee codsi bixinta waqtiga dheeriga ah
Halkan waxaa ah laba nooc oo aad isticmaali karto.
Ujeeddo: Codsiga lacag-bixinta saacadaha dheeraadka ah
Ka mid noqoshada shaqaalaha illaa iyo [taariikhda shaqaalaynta] ee [booska], waxaan shaqeeyay [tirada saacadaha dheeraadka ah ee shaqeeyay] laga bilaabo [taariikhda] illaa [taariikhda]. Waxaas oo dhan si looga qaybqaato horumarinta shirkadda loona gaaro ujeeddooyinka billaha ah. Markaa waxaan dhaafay 35-ka saacadood, waqtiga shaqada sharciyeed usbuucii.
Xaqiiqdii, markii aan helay diiwaanka mushaharkeyga ee bisha [bisha uu qaladkeygu ka dhacay] iyo markaan aqriyay, waxaan ogaaday in saacadahaas dheeriga ah aan la tirin.
Tani waa sababta aan u qaatay xorriyadda aan kuu soo dirayo faahfaahinta soo koobaya waqtigayga dheeriga ah inta lagu jiro muddadan [ku soo lifaaq dhammaan dukumintiyada caddaynaya saacadahaaga shaqada iyo caddaynaya inaad shaqaysay saacado dheeraad ah].
Waxaan jecelahay inaan idin xasuusiyo iyadoo la adeegsanayo qodobada qodobka L3121-22 ee Xeerka Shaqada, waa in la kordhiyaa waqtiga dheeriga ah. Nasiib darrose, sidan ma aheyn mushaharkeyga.
Sidaa darteed waxaan kaa codsanayaa inaad soo dhex gasho si xaaladdayda loo dejiyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Inta aan jawaab kaa sugayo, fadlan aqbal, Marwo, salaan qaali ah.
Aniga oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda tan iyo [taariikhda shaqaalaynta] boostada [post], waxaan haystaa qandaraas shaqo oo xusaya shaqada toddobaadlaha ah ee aan ka badnayn 35 saacadood. Si kastaba ha noqotee, waxaan helay warqaddayda mushaharka waxaana layaab igu noqotay, in waqtiga dheeriga ah ee aan shaqeeyey aan la tixgelin.
Xaqiiqdii, inta lagu jiro bisha [bisha], waxaan shaqeeyay [saacado badan] waqti dheeri ah codsi marwo ah (magaca kormeeraha) si loo gaaro ujeeddooyinka bisha.
Waxaan jecelahay inaan idin xasuusiyo sida uu dhigayo Xeerka Shaqaaluhu, waa inaan helaa koror ah 25% sideeda saacadood ee hore iyo 50% kuwa kale.
Sidaas darteed waxaan kaa codsanayaa inaad si naxariis leh ii siiso inta la igu leeyahay.
Waan kaaga mahadcelinayaa ka-hor-imaadkaaga waaxda xisaabaadka, fadlan aqbal, Mudane, muujinta tixgelinteyda ugu sareysa.
Soo dejiso "Premier-modele.docx"	Premier-modele.docx - Waxaa lasoo dejiyey 7814 jeer - 20 KB
READ Miyay fiicantahay in la diro iimaylo ama warqado?
Soo dejiso "Deuxieme-modele.docx"	Deuxieme-modele.docx - Waa la soo dejiyey 7301 jeer - 20 Kb
Waraaqo tusaalooyin ah oo lagu codsado lacag bixinta wakhtiga dheeriga ah Janaayo 8th, 2022Tranquillus
horeCovid-19: mudada sugitaanka waa laga saaray shaqooyinka joojinta qaarkood
socdaFrance Relaunch | Daahfurka barnaamijka "1 dhalinyaro, 1 xal"